Waaheen Media Group » Gurmadkii Xawayaanka W/Q: Cali Cabdi Coomay Home
Browse:Home Articles Gurmadkii Xawayaanka W/Q: Cali Cabdi Coomay	Gurmadkii Xawayaanka W/Q: Cali Cabdi Coomay
Comments Off on Gurmadkii Xawayaanka W/Q: Cali Cabdi Coomay	Xawayaanka Eebe koonka ku abuuray waxa ay u kala baxaan laba qaybood: (1) Qaybta dabjoog ah, oo ah nimcoolayda la dhaqdo. (2) Qaybta duurjoogta ah, oo ah ta ayga ku nool. Seben hore waxa la sheegay inay xoolaha dabjoogta ah masiibo ku habsatay sida noolaha kaleba ay ugu dhacdo. Dabadeed dhibaatadaa soo foodsaartay si ya uga samatabaxaan, waxa ay gargaar iyo gurmad weydiisteen walaalahood ay isku haybta yihiin ee ay wadaagaan afarta lugood. Gurmadkii iyo gargaarkii duurjoogtu u fidisay dabjoogtu wuxuu u dhacay sidan:
Shabeel: oo ka mid ah kuwa ugu orodka dheer afar lugoodlaha, wuxuu yidhi, waxa aan madax ka ahay hayadda daryeelka iyo horumarinta oo waayadii hore ka tirsanayd xawayaanka dabjoogta ah.
Go’aankii xawayaanku wuxuu noqday mid xawayaannimo, oo halkii cabashada dabjoogta ay waxa ka qaban lahaayeen, waxa ay kala qaybsadeen quudashada intii hadhay, taasina waxa ay la mid tahay Hayadaha samafalka ee uu soo gurmada meelaha ay ka dhacaan macaluushu, gaar ahaan kuwa Qaramada Midoobay. Hay’adahaasi waxa ay shaqeeyaan qaab dillaalnimo, oo halkii ay macaluusha ka dawayn lahaayeen ayey mucaawimada loo soo dhiibay waxna bangiyada adduunka dhigtaan, waxna si fool xun ugu tamashleeyaan hudheelada Kiiniya.